Marka la eego shaxanka (sawirka muuqaalka): howlgalka khatarta leh ee gabadha quruxda badan iyo ku dhawaad ​​howl aan macquul aheyn oo loogu talagalay aabihii hore ee caloosha jilcan, laakiin hooseeyaha guud ...	Akhri wax dheeraad ah
1. Sababtoo ah TV-yada ayaa bedelay diinta sida afduubka dadka (Marx) iyo shaashadaha HD, waa wali sarajoogga sareeya. 2. Sababta oo ah diintu waa daadin iyo jawaab aad u fudud ...	Akhri wax dheeraad ah
Oohin? Maadaama aad shaqooyin badan qabtid? Ma jiran tahay Miyaad lumisay qof aad jeceshahay? Ma ninbaa? Maaha wax mudan in la jeclaado; maxaa yeelay intaad ooyaysaa, aqri ...	Akhri wax dheeraad ah
Iyadu iyadu ma ay aqoon iyaga, laakiin waxay ku tidhi: Haweenay: - Anigu garan maayo adiga, laakiin waa inaad gaajaysan tahay. Fadlan kaalay gurigayga si aad u hesho qaniinyo wax cuna, waxay waydiisteen ...	Akhri wax dheeraad ah